Tia Namana ka Nikarakara Sakafo Nandritra ny Fivoriambe
HAMAKY AMIN'NY TENY Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Cinyanja Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Letonianina Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mongol Norvezianina Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sango Serba Serba (Soratra Romanina) Shona Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Tiv Tseky Tshiluba Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Yorobà Zapoteky (Andilan-tany)
FOTOANA miavaka foana ny manatrika fanasambe ara-panahy. Vao mainka faly anefa isika amin’ireny fotoana ireny rehefa miara-misakafo.
Nanao fivoriambe valo andro tany Cedar Point, Etazonia, ny Mpianatra ny Baiboly tamin’ny Septambra 1919. Nipetraka sy nisakafo tany amin’ny hotely ny mpanatrika. Be lavitra noho izay noeritreretina anefa no tonga. Very hevitra àry ireo mpandroso sakafo, ka nitsoaka an-daharana. Kivy ilay mpitantana ny lakozia ka nanontaniany ny mpanatrika raha nisy tanora vonona handroso sakafo. Maro no nazoto, anisan’izany i Sadie Green. Hoy izy: “Izay aho vao nandroso sakafo, nefa tiako ilay izy.”
Lasa nasiana sakafo ny fivoriambe taorian’izay ary be dia be no vonona hanampy hikarakara an’izany. Maro ny tanora lasa nanana tanjona ara-panahy rehefa niara-niasa tamin’ny mpiray finoana taminy. Nikarakara sakafo nandritra ny fivoriambe iray tamin’ny 1937, ohatra, i Gladys Bolton. Hoy izy: “Nihaona tamin’ny olona avy any amin’ny faritra maro aho, dia nahare azy ireo niresaka ny fomba nandreseny olana. Tamin’izay aho no voalohany te ho mpisava lalana.”
Hoy koa i Beulah Covey, anisan’ny mpanatrika: “Nazoto be ny mpiasa ka nizotra tsara ny zava-drehetra.” Nisy ihany anefa ny olana. Efa tonga tao amin’ny Kianja Dodger, any Los Angeles, Kalifornia, ohatra, i Angelo Manera tamin’ny 1969 vao nahalala fa hiandraikitra ny sakafo izy. Hoy izy: “Mbola tsy natahotra hoatr’izany aho!” Nila nanao tatatra kely 400 metatra, ohatra, ry zareo mba hitarihana gazy nankao an-dakozia.
Francfort, Alemaina, 1951
Nazoto be koa ny mpiasa an-tsitrapo tany Sierra Leone tamin’ny 1982. Nodiovina aloha ilay faritra izay vao naorina teo ny toerana fisakafoana. Izay fitaovana nisy no nampiasaina. Nahay nitady hevitra koa ny rahalahy tany Francfort, Alemaina, tamin’ny 1951. Nanofa lohamasinina izy ireo mba hakana etona handrahoana sakafo tamin’ny vilany 40. Vitan’izy ireo ny nandroso sakafo ho an’olona 30 000, tao anatin’ny adiny iray. Nasaina nitondra antsy sy forosety ny mpanatrika mba hampihenana ny asan’ireo 576 nanasa vilia. Niahy ny vahiny koa ny mpahandro tany Yangon, Myanmar, ka tsy nataony masiaka be ny sakafon’izy ireo.
“MISAKAFO MITSANGANA RY ZAREO”
Nahamay be ny andro ary maro be no nilahatra sakafo tamin’ny fivoriambe iray tany Etazonia, tamin’ny 1950. Nahasoa an’i Annie Poggensee anefa ny nilahatra teo. Hoy izy: “Variana be aho sady faly erỳ nihaino ny resaky ny rahavavy roa nandeha sambo avy tany Eoropa.” Niresaka ny fomba nanampian’i Jehovah azy hanatrika an’ilay fivoriambe izy roa. Hoy ihany i Annie: “Izy roa no faly indrindra tamin’ny olona teo. Tsy nampaninona azy ireo ilay nilahatra ela be sy nafana be.”
Tranolay malalaka be no toeram-pisakafoana tamin’ny fivoriambe maro, ary nisy latabatra avo be nalahatra. Natao izany mba hisakafo haingana izay nankeo ka ho afaka hiditra indray ny manaraka. Be dia be mantsy no nila nisakafo, ka raha tsy izany tsy ho afaka hisakafo mandritra ny fiatoana izy ireo! Hoy ny lehilahy iray tsy Vavolombelona: “Mba fivavahana hafahafa koa ity. Misakafo mitsangana ry zareo.”
Nety sy nilamina tsara ny zava-drehetra ka gaga ny manam-pahefana sivily sy miaramila. Nanara-maso ny toeram-pisakafoana tao amin’ny Yankee Stadium, any New York, ohatra, ny miaramila amerikanina. Nampirisihin’izy ireo hanao toy izany koa Atoa Faulkner, manamboninahitra tao amin’ny minisitera misahana ny tafika britanika. Nanatrika an’ilay fivoriambe “Fanjakana Mandresy” tany Twickenham, any Angletera, àry izy mivady tamin’ny 1955. Nilaza izy fa hitany hoe ny fitiavana no nampandeha tsara ny zava-drehetra tao.
Nazoto nikarakara sakafo mahasalama sy mora vidy ho an’ny mpanatrika fivoriambe ny mpiasa an-tsitrapo, nandritra ny taona maro. Asa be anefa ilay izy ka matetika no mpiasa maro be no nilaina ary nila niasa nandritra ny ora maro izy ireo ka tsy nandre ny fandaharana sasany, na izy manontolo mihitsy. Notsorina àry ny fikarakarana sakafo tany amin’ny tany maro, taloha kelin’ny 1980. Nanomboka tamin’ny 1995, dia nasaina nitondra sakafo ny mpanatrika. Tsy nilaina intsony ny nikarakara sakafo ka afaka nihaino ny fandaharana sy nifanerasera tamin’ny mpiara-manompo ny rehetra. *
Azo antoka fa nankasitrahan’i Jehovah ny asa mafy nataon’ireo nikarakara sakafo ho an’ny hafa. Maro no mbola mahatsiarotsiaro an’ireny fotoana nahafinaritra ireny. Tantara sisa izany, nefa hita foana hoe ny fitiavana no mampiavaka ny fivoriambentsika.—Jaona 13:34, 35.
^ feh. 12 Mbola misy asa an-tsitrapo maro azo atao anefa hatramin’izao, rehefa fivoriambe.